Dzvanya-ku-Kufona Chave Chakakosha kune Yemunharaunda Kutsvaga Kushambadzira Kubudirira | Martech Zone
Chitatu, Kukadzi 21, 2018 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Douglas Karr
Dzvanya-kufona inobvumira vangangoita vatengi kufonera bhizinesi rako nekukanya kumwe chete kubva kunjini yekutsvaga mhedzisiro. Vatengi vachiri kuda kufonera mabhizinesi uye tinya-ku-kufona zvinoita kuti zvive nyore kupfuura nakare kuti ivo vaite izvozvo. Global kudzvanya -kudaidza mari yaive $ 7.41 bhiriyoni muna 2016 uye izvi zvinotarisirwa kukwira kusvika kumadhora 13.7 bhiriyoni muna 2020
Muchokwadi, 61% yevanoshandisa nhare vanoti tinya-kufona inonyanya kukosha muchikamu chekutenga. Ita shuwa kuti bhizinesi rako rakagadzirira. Iyi infographic kubva Meseji Dzakamira, Iyo Yeku-Kanda-Kufona Mukana: Nei iyo Runhare Rwokudzokera muVogue, ruzivo rwekuti kudzvanya-kusheedzera kwave chinhu chakakosha mukubhadharwa kwekutsvaga kwekushambadzira.
Iyo infographic zvakare inonongedzera kuti haizi chete chiitiko cheyakabhadharwa yekutsvaga kushambadzira, zvakare chiitiko chinofanirwa kuitiswa pane yega yega webhusaiti uko mabhizinesi kana vatengi vangangosvika kwauri nhare.
Izvo hazvisiwo zvekungofamba nhare. Sezvo desktops ichibatana nefoni yako kana uine nhare dzekufona pavari, izvi zvinongedzo zvinoshanda futi. Skype, semuenzaniso, ichavhura uye kufona kana ndikabaya pane yakabatana nhamba yefoni pane yangu Mac.
Kana iwe usina chokwadi sei, ini ndanyora posvo yekuti ungaita sei hyperlink nhamba yefoni. Isa iri kumusoro pane yako runyorwa rwesaiti yekumisikidza yekuvandudza iwe yaunofanirwa kuita nhasi!
Tags: tinya kufonadial nhambahyperlink nhamba yefoniinfographicm2onholdYeMahara neThebhu Kushambadzirarunhare mbozhanhare yekufona nhamba